ဖောက်ခွဲရေးသမားကြောင်ကြီး မသေပါ။ Pardon | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » ဖောက်ခွဲရေးသမားကြောင်ကြီး မသေပါ။ Pardon	35
ဖြောင်းခွပ်..ဘုံး အင့်..။ “အောင်မလေး ကြောက်ပါဘီဗျ ချမ်းသာပေးပါ ကျန်းမာရေးပါ။ မသိလို့ လုပ်မိပါတယ်။” “ဘာကြောက်ပါပြီလဲ၊ သရဲဂေါင်းလိုလို သူဒေါ်စင်လိုလိုနဲ့ အမှောင်ထဲမှာနေပြီး ဟိုဟာထောင်ပြရဲတဲ့အကောင် (လက်သီး) ဆက်တီးကွာ.. ဒီလိုကောင်မျိုး အရှင်မထားနဲ့၊ ဖြစ်သမျှ ငါတာဝန်ယူတယ်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အယာရှိကြေးမုံဂျီး ဟိန်းဟောက်သံဖြစ်သည်။ ကြောင်ပေါင်းစုံ လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးအဖွဲ့ဝင် ကြောင်ကြီးအား မြို့တွင်းဖောက်ခွဲရေး ကြံစည်သည်ဆိုကာ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းနေသည်။ အစာမကျွေး အနားမပေး သုံးရက်တိုင် ကြာမြင့်နေသော်လည်း ဝန်ခံချက် တစုံတရာ မရသေးပေ။ သို့သော် ဗိုလ်ကြေးမုံဂျီး စစ်ကြောရေးစခန်းသို့ ရောက်သွားသူတိုင်း ပြန်လမ်းမရှိရကား ဂေဇက်ရွာသဂျီး ဗလီဆရာ အဗ္ဗဒူလာဥခိုင်၊ ရာအိမ်မှူး ရွှေတိုက်စိုး၊ အရက်ပုန်းရောင်းသူ ကပုတို့မှာ လွန်စွာပျော်မြူး နေကြသည်။ ကြောင်ကြီးသည် သူတို့အတွက် ခလုပ်ကသင်း မဟုတ်ပါလော..။ :P
ကြောင်ကြီးအတွက် လွတ်မြောက်လမ်း မရှိနိုင်တော့၊ ကံစီမံရာ ခံရပေတော့မည်။ ကြေးမုံဂျီးပြုသမျှ နုရမည့်ဘဝ သေမထူး နေမထူးဖြစ်ပြီ။ ကြောက်လျင် ဘဝတွင် နှစ်ခါသေသည်၊ ထို့ကြောင့် ဟန်ကိုယ့်ဖို့ “ဟေ့.. ကြေးမုံဂျီး လည်မော့ပေးရမလား လည်စင်းပေးရမလား၊ သေမှာကြောက်ရင် တော်လှန်ရေး လုပ်ဘူးကွ။” “အေး.. ဖြတ်မှာ လည်ပင်း မဟုတ်ဘူး လဗြွတ် လဗြွတ်။ သောက်တုပ်ပလုပ်…သတ္တိခဲကြောင်ကြီး တုန်လှုပ်သွားသည်၊ မိုးစက်၊ ပုရ်ှတို့နှင့် ရှင်ကွဲ ကွဲရတော့မည်။ ဧရာထွန်းဂလေးနှင့် သိကျွမ်းရသည်မှာ များမကြာလှသေး၊ ဦးကြောင်ကြီးအား အသဲနှလုံးမရှိသူဟု အထင်လွဲကြတော့မည်။ ပြန်လွတ်ခဲ့လျင် သူတို့ကို မည်သို့ရှင်းပြရမည်နည်း။ မဖြစ်ချေဘူး ကြေးမုံဂျီး ကြည့်ရတာ ဂျပန်ကင်ပေတိုင်ပုလိပ် ဝင်စားပုံရတယ်။ ဝန်ခံလိုက်မှ သက်သာမယ်။ ခွင့်လွှတ်ကြပါ ရဲဘော်တို့… ကြောင်ကြီးမှာ ရွေးစရာလမ်း မရှိတော့လို့ပါ။ “ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျနော့်မှာ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ စာရေးကိရိယာဆိုင်က ဝယ်ထားတဲ့ ခဲတံချွန်ဓါး၊ ပေတံ၊ သရေကွင်းတထုပ် စာကြည့်စားပွဲ အံဆွဲထဲမှာ သိမ်းထားမိပါတယ်။” “လက်နက်တွေကတော့ ဟုတ်ပြီ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေရောကွ” “ပြောပါ့မယ်ခင်ဗျာ..စားပွဲပေါ်မှာ ခဲဖျက်၊ ခဲတံ၊ ယမ်းမီးခြစ်၊ ဖယောင်းတိုင်တို့ တင်ထားပါတယ်။” “အဲဒါအကုန်လား၊ အခြား ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေ ရှိရအုံးမယ်။” “မလောက်သေးရင် အိမ်မှာရှိတဲ့ ဦးချိန်တီလျက်ဆားပုလင်း ရှာယူကြပါ၊ မတွေ့ရင် အိမ်နားက မာမူကြီးကုန်စုံဆိုင်မှာ မေးဝယ်လို့ ရတယ်။” “ဩော်…မင်းက တာလီဘန်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ် ရှိတယ်ပေါ့၊ ရခိုင်အရေး ရီပို့တင်စရာရှိတာနဲ့ အတော်ပဲ၊ မင်းတော့ မိုးပေါ်က သိကြားမင်းဆင်းကယ်တောင် မလွတ်ဘူး။” 
တရားရုံးတွင် ကြောင်ကြီးဘက်မှ စေတနာဖြင့် ရှေ့နေလိုက်ပေးမည့်သူကား လေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (အငြိမ်းစား) အေးရှားမာစတာဖြစ်သည်။ သူက ကြောင်ကြီးနှင့် လူဂျင်းမသိသော်လည်း စိတ်ချင်းအလွန် ရင်းနှီးနေသဖြင့် ပိုက်ဆံမယူဘဲ အမှုလိုက်ပေးလေသည်။ ကြောင်ကြီး ဝန်သာဝန်ခံလိုက်၊ ငြင်းရင်ပိုဆိုးမယ်။ ရှေ့နေဂျီးမာစတာ ပေးသောအကြံဖြင့် တရားသူဂျီးမေးသမျှ အကုန်လုံး ခေါင်းညိမ့်ရတော့သည်။ ညူကလီးယားဗုံး ဖောက်ခွဲဖို့ ကြံစည်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလား၊ ဟုတ်ပါတယ်။ တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံနဲ့ နယ်စပ်ကနေပစ်မယ် ဆိုတာရော….၊ မှန်ပါတယ်။ အာကာသလွန်းပျံယာဉ်နဲ့ တပ်ချုပ်ကြီးအိမ် အသေခံထိုးစိုက် ဖောက်ခွဲမယ်ဆိုတာ တကယ်လား၊ ဝန်ခံပါတယ်။ ဤသို့ဖြင် စီရင်ချက်ချမည့်နေ့ ရောက်ရှိလာလေပြီ။ “အမိန့်ချမယ် အားလုံးနားထောင်၊ တရားခံကြောင်ကြီး (အဖဦးကျား၊ အမိဒေါ်ခြင်္သေ့) တွင် ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်း တွေ့ရှိရ၍ သေဒဏ်ချမှတ်သည်။ အယူခံဝင်လိုက တပတ်အတွင်း ရုံးဒေါ်သို့ တင်သွင်းစေ။” စေတနာရှင် ရှေ့နေဂျီး အာရှမာစတာကား အဆင်းဘီးတပ်လေပြီ၊
ကြောင်ကြီးပြန်လွတ်ကြောင်း သိလိုက်ရသော သဂျီးအဗ္ဗဒူလာဥခိုင်ခမျာ အလန့်တကြား တံတွေးမျိုချမိသဖြင့် ဥပုသ်ပျက်သွားသည်။ ရာအိမ်မှူးရွေတိုက်စိုးကား စွမ်းအားရှင်အင်အား ထပ်တိုးရန် လူမိုက်ရှာဖွေရလေသည်။ အရက်ပုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင် မိုက်ကယ်ပုကတော့ သိမ်းထားသော အရက်များကို လျော့ဈေးဖြင့် တွန်းရောင်းသည်။ သူတို့စိုးရိမ်သလို ဖြစ်မလာချေ။ ပြန်လွတ်လာချင်းချင်း မိတ်ဆွေဂျီး အေးရှားမာစတာ ကူညီမှုဖြင့် တရုတ်ပြည်ရှိ ကျီးမုံဂျေး ဘာဘီကျူးဆိုင်တွင် စာရိတ်ငြိမ်း လခကောင်း အလုပ်လုပ်ရန် ထွက်ခွာသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဦးကြောင်ကြီး သူဌေးဖြစ်မည်လော၊ သို့တည်းမဟုတ် …………………………………………ဆက်ရန်မျှော်။ :eek: ဦးကြောင်ကြီး တရုတ်ပြည်တွင် ဇိမ်ကျနေဗုံ
အောင်ကြူး has written 390 post in this blog.
San Hla Gyi says: ဟုတ်ပ ကိုကြောင်ကြီးရေ ပို့စ်ကောင်းလေးပါလို့ ချီးကျူးရင်းနဲ့ ဒီလဟာ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဥပုသ်လလို့ သိရတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းမှာ အစာမစား ရေမသောက်ပဲ ပျမ်းမျှ ည ၇နာရီ ၃၀ လောက်ကနေ မနက် ၅ နာရီခွဲလောက် အထိပဲအစာစားလို့ ရတယ်ပြောတယ်။ ကျနော်သိသလောက် ၁၈ရက်နေ့အထိ ဥပုသ်လဖြစ်ပြီး ဒီလ ၁၉ ရက်နေ့မှ ဥပုသ်ထွက်မှာလို့ သိရတယ်။
ဦးဦးပါလေရာ says: ဖေါက်ခွဲရေးသမားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံစေချင်ရင်
မြန်မြန်သေချင်လာအောင်လုပ်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1822
surmi says: တော်သေးတာပေါ့ 
mamanoyar says: ဦးကြောင်ကြီး သေလို့မဖြစ်သေးဘူး
မသေပါစေနဲ့ ရွာထဲတစ္ဆေခြောက်မှာစိုးလို့ ဟဲဟဲ :P
ဆူး says: ဥကြောင် မသေ ဘူး ဆိုတော့ မိုးဇက် တို့ ပုရှ် တို့ နဲ့ ပြန်တွေ့ နိုင်သေးတာပေါ့.. ဘာလို့ တရုတ်ပြည် ထွက်ပြေးတာလဲ.. အမှုဟောင်းတွေ ထပ်ပြီး အတိုင် ခံ ရမှာ စိုးလို့ လား။
နေ၀န်းနီ says: ပြေးပါစေ …. ။ စီလုပ်က ကြောင်သားဆိုလွှတ်ကြိုက်တာ….။ :P :P
pooch says: ကြားတာကတော့ ဘာဘီကျုးဆိုင်မှာ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း မတော်တဆ ကြောင်မွှေးတွေ မီးလောင်ကုန်တယ် ပြောတယ်။ :D
Shwe Tike Soe says: ကြောင်ကြီး လျှောင်ကီး
etone says: တရားခံကြောင်ကြီး (အဖဦးကျား၊ အမိဒေါ်ခြင်္သေ့) တဲ့လား .. ဒါကြောင့်ထင်တယ် .. လည်ဆံမွှေးက ငယ်ထိပ်တက်ပေါက်နေတာ … ခွိခွိ … ။ :P
Thu Wai says: ဒါနဲ့ သူကြီးကတကယ် မွတ်စ် ကြီးလား
ကြောင်ကြီး says: ဒီလိုရှိပါတယ်..သဂျီးမွတ်စ် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ သူ့ဖာသာသူ ဟာဂျီဘွဲ့ခံခံ မခံခံ၊ ဥပုသ်စောင့်စောင့် မစောင့်စောင့်၊ တနေ့ငါးကြိမ် ဗလီတက်လို့ နဖူးမှာအမာရွတ်စွဲစွဲ မစွဲစွဲ၊ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းလို့ မုတ်ဆိတ်ဖားလားချချ မချချ၊ နွားပေါ်ပေါ် မပေါ်ပေါ်၊ ကြက်လှီးလှီး မလှီးလှီး ပတ်ဝန်းကျင်က ကျိုးသင့်ကြောင်းသင့် မကန့်ကွက်သ၍ ကြိုက်ရာလုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သဂျီးကဒေါ် သူနဲ့လက်ထပ်ပြီးနောက် သဂျီးတို့ဘာသာထဲပြောင်းသွား၊ အပြင်ထွက်ရင် ဘူကာလို့ခေါ်တဲ့ မျက်လုံးဖော်ရုံ ဝတ်ရုံဝတ်တာ၊ အိမ်တွင်းပုန်းနေတာလည်း သူတို့နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်စိုက်တဲ့အသီး ကိုယ်စားသုံးရမှာဖြစ်လို့ သဂျီးရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအပေါ် ဘာရယ်လို မှတ်ချက်မပေးဝံ့ဂျောင်းပါခင်ဗျာ..။ :cool:
မောင်ပေ says: ဟီးးးဟားးး
R Ga says: ကြေကြီးမသောင်….
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: တလုတ်ပြည်မှာ
အရီးခင်လတ် says: ကကြောင်ကြီး ရဲ့ အကြောင်းအရာ နဲ့ တော့ ဆက်စပ်မှု ရှိမရှိ မသိ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8431
kai says: တကယ်ပဲ..
ကြောင်ကြီး says: ယူအက်စ်မှာလည်း ဖြစ်ဖူးတယ်။ ပါလစ်စတိုင်းကနေ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နဲ့ ပြောင်းလာတဲ့ မိသားစုမှာဖြစ်တာ။ သမီးလုပ်သူက အမဲကောင်နဲ့ တွဲလို့ဆိုပြီး အဖေက အိမ်မှာသတ်ပစ်လိုက်တာ။ ပြီးတော့ အလောင်းဖျောက်ပြီး ရဲကို လူပျောက်တိုင်တယ်။ မိခင်လုပ်သူကပါ ရောလိမ်တော့ အမှုဖော်မရနိုင်ဘူးပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်က အက်ဖ်ဘီအိုင် ပြည်တွင်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ စောင့်ကြည့်စာရင်းမှာ ပါနေတယ်။ သေသွားတဲ့ ပီအယ်လ်အိုခေါင်းဆောင် ယာဆာအာရာဖတ်ရဲ့ လူယုံ၊ ငွေကြေးပံ့ပိုးပေးနေသူ ဖြစ်လို့ နောက်ယောင်ခံလိုက်နေတာ ကြာပြီ။ အခင်းမဖြစ်ခင်ထဲက သူ့အိမ်ခိုးဝင်ပြီး ထောက်လှမ်းရေးက အသံဖမ်းစက် ခိုးတပ်ထားတယ်။ လိုချင်တာက ပီအယ်လ်အိုနဲ့ ဆက်သွယ်မှုသတင်း ဒါပေမဲ့ ယုန်ထောင်ကြက်မိ ဖြစ်သွားတယ်။ လင်မယားနှစ်ယောက် အိမ်မှာ အပြန်အလှန် ပြောနေတာတွေကို စပ်ဆက်ပြီး အမှုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့၊ သက်သေအခိုင်အလုံနဲ့ စွဲချက်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ မွတ်စလင်နိုင်ငံ အတော်များများမှာ honor killing ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးတယ်။ သမီး၊ ညီမလုပ်သူလုပ်ရပ်ကြောင့် အထူးသဖြင့် အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ မိသားစုအရှက်ရစေတယ်လို့ သတ်မှတ်ရင် ဦးလေး၊ မောင်၊ အဖေတို့မှာ သတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ပိုဆိုးတာ ကိုယ့်သားချင်းမိန်းခလေးကို အခြားလူက စော်ကားသွားရင် သူ့ရဲ့သွေးရင်းမိန်းခလေးကိုလည်း ပြန်စော်ကားပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။ eyes for eyes ကိုဓဥပဒေက လာတယ်ထင်တာပဲ။ အစ္စလာမ်ရှီးယား ဥပဒေမှာလည်း ခွင့်ပြုထားတယ်နဲ့တူတယ်။ လူတွေကို အကြောက်တရားနဲ့ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားနေအောင် အုပ်ချုပ်ထားတာပေါ့ဗျာ။ ဘာသာရေး တယူသန် မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေနဲ့ အစိုးရ လက်လှမ်းမမှီနိုင်တဲ့ တောနယ်ပိုင်း မွတ်စလင်ဒေသတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။ ခေတ်အမြင်ရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေက မြို့ဂျီးပြဂျီးတွေမှာ နေတယ်။ အစွန်းရောက်တွေကို ဩဇာမလွှမ်းဘူး၊ လွှမ်းဖို့ကြိုးစားရင် အသတ်ခံရတယ်။ အမြဲတမ်း လုံခြုံရေးယေူပေးဖို့ကလည်း ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မွတ်စလင်ကမ္ဘာမှာ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေ ကြီးစိုးနေတာ။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဇာတ်ရှိန်ကတော့ ဟိုက်စပိဖြစ်လာဘီ
ဆူး says: ဝေ့ သူငယ်လေး နင်က မျိုး မစစ်ဘူးဝေ..
Was this answer helpful?LikeDislike 3091
Foreign Resident says: ကိုကြောင်ကြီး ပြောတဲ့ သတင်းကို အရင်က ဖတ်ဘူးပါတယ် ။
အရီးခင်လတ် says: ကျွန်မ က ပြောရင် တည့်တည့် ဘဲ လာပြောမှာပါ အဘရယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ;-)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2563
အလင်းဆက် says: တော်..ပါသေးရဲ့ တော်….
အတိသဌ္ဇနာဂရ says: ကိုကြောင်ကြီးပြောလိုက်မှ သူကြီးက ဘွဲ့ အသစ်နဲ့ ဥပါခိုင်ပါလေရောလား
San Hla Gyi says: ကိုကြောင်ကြီးရေ
ကြောင်ကြီး says: ကြောင်မှားနေတယ်နဲ့ တူဒယ်ဗျ။ လောကမှ အမြီးပေါက်တိုင်း နှုတ်ခမ်းမွှေးရှိတိုင်း နားရွက်ထောင်တိုင်း ကြောင်ကြီးပါလို့ တပ်အပ်ပြောလို့ ရဘူးလေ…. ကြောင်ကြီး အဲဒီသစ်ဆားရှဉ်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုထားတာ ကြာပေါ့…
Crystalline says: ဦးကြောင်ရဲ့ ရှာရာပိုဗာလေး အိုလံပစ်ဖိုင်နယ်မှာ ဆရီနာလက်ချက်နဲ့တမှတ်တောင်အနိုင်နီုင်ယူ လိုက်ရတယ်..သနားလိုက်တာနော်..သူတို့ပွဲကြည့်ဖို့အားခဲထားတာ..စိတ်ကုန်လို့လိုင်းပြောင်းလိုက်တယ်..
San Hla Gyi says: အင်း ကျနော်ပဲ အမှတ်မှားသလား မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် မမှားနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ဟိုရက်ပိုင်းက ဆိုပေမယ့် သိပ်တော့ မကြာသေးပါဘူး။ ကိုကြောင်ကြီး ပြောတာ မှတ်မိသလိုပဲ။ ဘာတဲ့။ ဒီမေးခွန်းကို သူကြီးကို မေးနေတာလည်း သုံးလေးရက် ရှိပြီ။ အားလုံး ယောင်ဝါးဝါးပဲ ဆိုတာလဲ ပါတယ်။ အဖြေကြီးက အင်ကြီး မယူဘူးလို့ ပြန်ပြောတာတောင် မှတ်မိသလိုပဲ။ ကြောင်တွေ အများကြီး ရှိပေမယ့် ပြောဟန် ရေးဟန်တော်တော် ကွာပါတယ်။ ကျနော်က အဲဒီသစ္စာရှင် ခရီးသည်တွေကို ကိုကြောင်ကြီးမေးခွန်းများ မေးသလားလို့ပါ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 865
ရဲစည် says: ဟူး…..
ဒါနဲ့ ဇဂါးမစပ် ဒေါက်တာချက်ကြီးက အူးကြောင်များလားလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 703
marblecommet says: အူးကြောင်တို့က
ဆူး says: ဥပစ္ဆေဒကံ မပါလို့ မသေရပေမဲ့ မိုးဇက်ကလေး ပုရ်ှလေး တို့နဲ့ ဘာလို့ တလုပ်ပြည် ထွက်လဲ ဆိုတာ စောစောကမှ သတင်းတခု ရလိုက်တယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကြောင်ကြီး ဇာတ်တူသားမစားနဲ့နော့
kotun winlatt says: ကိုဖက်တို့တော့ဗျာ..
Moe Z says: အမ်… မှားနေပြီထင်တယ်
တရုတ်တွေ BBQ လုပ်စားလို့ ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့ အူးကြောင် အူးကြောင်ရေ .. အမျှ ..(၃)
marblecommet says: ဟုတ်ကဲ့လားကွယ်
အလင်းဆက် says: ဟုတ်ပါ့တော်…
Comments By Postသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - kai - အလင်း ဆက်၎ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - kyeemite - Myo ThantComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - TNA - အရီးခင်လတ်ရွာသူ/သားများ အတွက် - KZ - Munetezလူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - ဦးဦးပါလေရာ - ရာမည``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - ဦးဦးပါလေရာ - ကြောင်ဝတုတ်အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - ဦးဦးပါလေရာ - မိုချိုသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - Wow - ဆူးရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း - အရီးခင်လတ်နားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - အရီးခင်လတ် - Ei Kyipyarမန္တလေးမြို့ကအစားအသောက်တွေ - KZ - kaiအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - အရီးခင်လတ် - Foreign Residentအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - အရီးခင်လတ် - ဦးကြောင်ကြီးသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အရီးခင်လတ် - Myo Thantမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - ရဲစည် - မောင် ပေ``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - ခင် ခ - Munetezအိပ်မက်မင်းသမီး - Myo Thant - သူကလေးနံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook - weiwei - Miss Crystallineသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - သူကလေး - Mobile13တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ -etone - သူကလေးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - kyeemite - Miss Crystallineကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - သူကလေး - Mr. MarGaမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities